माधव नेपालसँग भीम रावल किन बिच्किए? अर्कै छ समूहभित्रको 'गसिप'
प्रकाशित: बुधबार, साउन ६, २०७८, २३:३९:०० नेपाल समय
काठमाडौं- आफ्नो समूहका बैठकहरुमा अनुपस्थित हुन थालेपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल उपाध्यक्ष भीम रावललाई भेट्न उनकै निवास टोखा पुगेर फकाउने प्रयत्न गरे। रावलको घरमा बुधबार भएको दुई घण्टे छलफलमा नेता नेपालले उनलाई विश्वासमा लिन प्रयास गरेका हुन्। यद्यपि, यी दुई नेताबीच यो बीचमा चिसिएको सम्बन्ध सुलह भइरहेको भने छैन।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिने दिन ३ साउनमा सांसदबाट राजीनामा घोषणा गरेका रावल त्यसयता नेपाल समूहको बैठकमा सहभागी भएका छैनन्। नेता नेपालप्रति सतहमा आएका रावलका गुनासा पार्टी एकता प्रक्रियामा आफ्नो भूमिकाप्रति छन्। तर माधव पक्षभित्र भने नेता रावलको मनोदशाको विश्लेषण अलि अलग तरिकाले भइरहेको छ।
विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक कदमको कडा विरोध गर्दै आएका रावल प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट राजीनासम्म किन पुगे? उनको सम्बन्ध नेता नेपालसँग किन चिसियो? यसबारे हामीले सोधखोजको यत्न गरेका छौं।
सबैभन्दा पहिला नेता माधव नेपालप्रति भीम रावलका गुनासाबारे चर्चा गरौं।
सूदुर पश्चिम क्षेत्रबाट प्रतिनित्व गर्ने अछाम गृहजिल्ला भएका नेता रावलले यो बीचमा माधव नेपालले आफ्नो समूहका रणनीतिक योजनाबारे सल्लाह नगरेको र आफूलाई ‘बाइकट’ गरेको बताइरहेका छन्। आफू निकटहरुसँग उनले मुखै फोरेर ‘माधव कमरेडले दल पनि धरापमा पार्ने र सम्बन्धमा पनि धरापमा पार्ने खेल खेलेको’ गुनासो गर्दै आएका छन्।
एमाले एकताका लागि पहल गर्न बनाइएको कार्यदल नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएर पनि समूहभित्र आफूलाई एक्ल्याउन खोजेकाले चित्त दुखेको भनाइ उनको छ। बरु मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडालाई च्यापिएको अनुभव आफूलाई भएको दाबी रावलको छ। ‘मलाई माधव कमरेडकै सचिवालयबाट बदनाम गर्ने काम भयो’, केही दिनअघि उनले समूहभित्रका एक नेतासँग बह पोख्दै भनेका थिए, ‘मैले विदेशी जासुसलाई भेटेँ भनेर हल्ला गरियो। मेरो अपमान भयो।’
अर्को कुरा, कार्यदलहरुका छलफल र वार्ताका विकासक्रमलाई नेता नेपालले अनुमोदन नगरेको गुनासो रावलको छ। सूदुरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र आफू निकटहरुसँग पनि उनले माधव नेपालले यो प्रक्रियाप्रति देखाएको उदासिनताबारे चिन्ता प्रकट गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले सदनमा विश्वासको मत लिने दिन अर्थात् आइतबार बिहान नेता नेपाल निवास कोटेश्वरमा भएको छलफलमा त उनले नेता नेपालसँग भनाभन नै गरे। सल्लाह नै नगरी देउवालाई विश्वासको मत दिने तयारी भएकोमा उनी आक्रोशित मात्रै देखिएनन, यसले दलको एकतामा गम्भीर असर गर्ने निष्कर्ष पनि निकाले। जवाफमा वरिष्ठ नेता नेपालले ‘एक्लै भए पनि आफूले राजनीतिक इमान्दारिताका लागि देउवालाई विश्वासको मत दिने’ बताए पनि नेता रावल अझ बढी असन्तुष्ट देखिएका थिए।
त्यही दिन संसद भवन बानेश्वर पुगेर सभामुखको सचिवालयमा आफ्नो राजीनामा दिएर उनले पत्रकारहरुलाई यसबारे ‘ब्रिफिङ’ गरे। माधव पक्षकै अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले रोक्दा रोक्दै उनले सञ्चारकर्मीहरुलाई आफ्नो राजीनामाको कारण सुनाए।
भीम रावल निकट नेता झपट रावल दसबुँदे सहमतिप्रति ओली र नेपाल दुवै इमानदार नदेखिएपछि भीमले राजीनामा दिएको बताउँछन्। उनका अनुसार देउवालाई मतदान गर्ने विषयमा अकस्मात् निर्णय आएपछि नेपालसँग पनि रावल बिच्किएका हुन्। रावलले भने, ‘खबरै नगरी जुन ढुंगले एक्कासि विश्वासको मत लिने निर्णय गरियो। एमाले एकताबद्ध हुन नदिने षड्यन्त्र हो। हामी देउवाका कार्यकर्ता होइनौं। एमाले एक हुन नदिने देउवा, पुष्पकमल दाहाल, राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर हुन्।’
तर गत ४ र ५ चैतमा एमालेको असन्तुष्ट समूहले गरेको राष्ट्रिय भेलामै केपी ओलीसँगै बस्न नसकिने भन्दै नयाँ पार्टी गठनको बाटोमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका नेता रावल किन यसरी बिच्किए भन्नेमा माधव समूहभित्र अलग विश्लेषण छ।
अब माधव समूहभित्र नेता रावलका विषयमा चलेका ‘गसिप’बारे चर्चा गरौं।
२० असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा लामो छलफल गरेका नेता रावललाई ओलीले त्यो भेटमा ‘ब्रेन वास’ गरेको चर्चा माधव समूहभित्र छ। ‘उहाँले यो बीचमा ओलीसँग दुई पटक अन्तरंग छलफल गरेपछि उहाँको भावभंगीमा र उहाँका तर्कहरुमा विरोधाभास देखिएकै हो’, सो समूहका एक नेताले भने, ‘बाहिर भन्दा जे भने पनि अन्तर्य अलिक फरक छ।’
सर्वोच्चले सदन पुनः स्थापना गर्छ र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने भेउ पाएपछि नेता रावलले आफ्नो आसन्न पोजिसनबारे पनि आफू निकटहरुसँग छलफल गरेका थिए। उनले एकाधपटक आफ्ना अगुवा नेता नेपालसँग पनि यो विषयमा चर्चा गरको बताइन्छ। यदि आफूहरु सरकारमा जाने स्थिति भएको खण्डमा नेता रावलले आफ्नो नेतृत्वमा बलियो मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री भएर जाने योजना बनाएका थिए। तर उनले बनाएको प्लान ‘ए’ त्यति सहज नहुने भएपछि उनलाई केपी ओलीले दिएका आश्वासनहरु मीठा लाग्न थालेको भनाइ ती नेताको छ।
भेटवार्ताहरुमा केपी ओलीले नेता रावलाई कार्यकारी अध्यक्षसम्मको आश्वासन दिएर लोभ्याएको भनाइ माधव समूहभित्र बाक्लै सुनिन्छ। ‘उहाँमा आएको परिवर्तनलाई माधव कमरेडले बुझेर नै उहाँलाई अलिक दूरीमा राख्न खोजेको बुझियो तर यो चाल पाएपछि रावल कमरेडले चित्त दुखाउनु भयो’, ती नेताले भने, ‘भने जस्तो नभएपछि उहाँले आवेशमा आएर राजीनामा गर्नुभएको हो। यद्यपि सांसदको राजीनामा अनुमोदन भइसकेको छैन।’
रावलको राजीनामालाई लिएर केपी ओलीले पार्टी बैठकमै ‘राजीनामा दिन हतार नगरेको भए हुने। हामी पनि छौं, तपाईको साथमा’भन्दै सहानुभूतिसहितको साथ प्रकट गरिसकेका छन्।
माधव नेपालबाट रावल टाढिएको चर्चा भइरहेकै बेला आज नेता नेपाल र रावलबीचको भेटले कस्तो परिणाम निकाल्ने हो, त्यसका लागि भने प्रतीक्षा नै गर्नुपर्छ।